Ihlaziywe ngo15 Septemba 2020
Ukubhukisha kwendawo yokuhlala Nokwezinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb okwenziwe ngaphambi okanye ngoMatshi 14, 2020, nokunosuku lokungena oluphakathi kukaMatshi 14, 2020 no31 Oktobha 2020, kuqukiwe kwipolisi ibe kungarhoxiswa ngaphambi kokungena. Iindwendwe ezifuna ukurhoxa ziza kuba neendlela zokurhoxa nokubuyiselwa imali ezinokukhetha kuzo, kwaye ababuki zindwendwe bangarhoxisa ngaphandle kokubhataliswa okanye kokuchaphazela ilungelo labo lokuba yiSuperhost. UAirbnb uza kubuyisa imali, okanye akhuphe imali enokusetyenziselwa ukuhamba, equka yonke imali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb yokubhukisha okurhoxisiweyo okukufanelekelayo ukubuyiselwa imali. Ukuze urhoxe phantsi kwale polisi, kulindeleke ukuba uveze ubungqina bemeko ekwenza urhoxe okanye uxwebhu oluxhasa into yokuba le ibiyimeko ongenakuyinceda.
Ukubhukishwa kwendawo yokuhlala nokubhukishwa Kwezinto Ezinokonwatyelwa zika-Airbnb okwenziwe ngaphambi okanye ngoMatshi 14, 2020, nokunosuku lokungena oluphakathi kukaMatshi 14, 2020 no31 Oktobha 2020, kusenokurhoxiswa ngaphambi kokungena. Oku kuthetha ukuba iindwendwe ezirhoxayo phantsi kwale polisi ziza kubuyiselwa yonke imali yazo okanye ibe yimali enokusetyenziswa kuhambo elingana nemali eziyibhateleyo (apho imali enokusetyenziswa kuhambo ifumanekayo khona), ababuki zindwendwe baza kukwazi ukurhoxa phantsi kwale polisi ngaphandle kokubhataliswa okanye lingakhange lichaphazeleke ilungelo labo lokuba yiSuperhost, ibe uAirbnb uza kuyibuyisela yonke imali yabo okanye ibe sisaphulelo esinokusetyenziswa kuhambo, kuquka imali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb.
Ukubhukishwa kwendawo yokuhlala okanye Kwezinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb okwenziwe ngoMatshi 14, 2020 okanye ngaphambi koko nokunosuku lokungena olusemva kuka31 Oktobha 2020 okwangoku akuzokuqukwa kwipolisi yethu yeemeko ongenakuzinceda yeCOVID-19. Ipolisi yokurhoxa yombuki zindwendwe iza kusebenza njengesiqhelo.
Siza kuqhubeka sikuhlola ukusebenza kwale polisi. Nceda uhlale ulijonga eli phepha ukuze ufumane inkcazelo entsha nehlaziweyo. Ukuba unokubhukisha okwenziwe ngoMatshi 14, 2020 okanye ngaphambi koko, nokunosuku lokungena olusemva ko31 Oktobha 2020, nceda uphinde ujonge apha ngo1 Oktobha 2020 ukuze ubone inkcazelo ehlaziyiweyo.